မိဘနှစ်ပါးအတွက် ရည်စူးပြီး အလှူတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ မြတ်ကေသီအောင် | Duwun
သူဟာ သမီး အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်ကေသီအောင်ကတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မိဘ နှစ်ပါးအတွက် အလှူအတန်းတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိမှာတော့ အငယ်ဆုံးမောင်လေးကိုလည်း စောင့်ရှောက်ရင်း ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Photo: Myat Kay Thi Aung
သရုပ်ဆောင် မြတ်ကေသီအောင်ဟာ မိဘနှစ်ပါးအတွက် ရည်စူးပြီး အလှူအတန်းတွေ လုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအလှူကိုတော့ နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေ တွေနဲ့ အတူ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူလေးဖြစ်ပါတယ်။
‘’လပြည့်နေ့လေး ကိုယ့်ဘုန်းဘုန်းကျောင်းမှာ အပါးနဲ့အမေ့တွက်ရည်စူးပြီး ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်၊ ဘုန်းဘုန်းများနဲ့ ဧည်သည်စားဖို့ ထမင်းကြော် ပွဲ၃၀၊ ပူတင်းဗူး၅၀၊ မြန်မာမုန့်မျိုးစုံ ဆနွင်မကင်းနဲ့ ကန်ဇွန်းဥ ကျောက်ကျော(သူငယ်ချင်းကလုပ်ပေး)လေးတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ဒါနပြုခဲ့တယ်။ သမီးလုပ်ပေးသမျှ ကုသိုလ်တွေအားလုံး အပါးနဲ့အမေ ရောက်ရာဘုံဘဝက သာဓုခေါ်နိင်ပါစေ။ချစ်တဲ့ သမီးကြီး လွမ်းနေပါတယ်’’ ဆိုပြီးတော့ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မြတ်ကေသီအောင် ဟာ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များတဲ့ မင်းသမီးကြီးတွေထဲက တစ်ဦးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး. မင်းသမီး ဆိုပေမယ့်လည်း အလှအပ ရေးရာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် စိတ်မဝင်စားတဲ့ သူဖြစ်တယ်လို့ Duwun Media အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
'' များသောအားဖြင့် အိမ်မှာ နေတုန်းကလည်း သနပ်ခါးကြိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ပါးကွက်ကလည်း အမြဲတမ်းကွက်တယ်။ ပါးကွက်ကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကွက်တာပါ။ ဆိုင်ထိုင်တော့လည်း ပါးကွက်နဲ့ပဲ. မိတ်ကပ်တွေလည်း တကယ်မကြိုက်ဘူး။ မတက်သာလို့သာ လိမ်းရတာ'' လို့ ကိုယ်ပွား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီး ကန်တော့ပွဲမှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။